﻿﻿ onlinekhabar.com #educratsweb
https://www.onlinekhabar.com/feed  58152
सरकार पूर्ण असफल : डा. भट्टराई
११ चैत, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकार असफलताउन्मुख रहेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले बाहृय लगानी घटेको, व्यापार घाटा बढेको, विकास खर्चसमेत लक्ष्यअनुसार नभएको उल्लेख गर्दै सरकार असफल भएको बताएका हुन् । काठमाडौंमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारको एकवर्षे कार्यकालबाट जनता समेत सन्तुष्ट हुन नसकेको […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752774
ग्लोबल पिस पार्क : शान्ति खोज्दै पुग्छन् मन्त्रीदेखि प्रेमिल जोडी
११ चैत, बुटवल । एकदशक अघिसम्म बुटवलको ढबाहा उत्तरको वन क्षेत्रमा केही सालका रुख र झाडीमात्रै थियो । अधिकांश भाग खाली चौर थियो । झाडीमा कतिपय युवाहरुले लुकेर लागु औषध सेवन गर्ने गर्थे । त्यही उराठलाग्दो वन क्षेत्र अहिले रमणीय नमूना पर्यटकीय स्थल बनेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको १२ ढबाहाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको १० हेक्टर […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752778
बलबहादुरका पालाको त्यो कांग्रेस ! शेरबहादुरको यो कांग्रेस !
०२९ सालको घटना हो । बुबा बलबहादुर राई भारत निर्वासनबाट फर्किएर जिल्ला (ओखलढुङ्गा) आउनुभएको थियो । त्यहीबेला प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गर्‍यो । ठूलो दाइ प्रेमराज राई, के भएछ भनेर बुझ्न जिल्ला अदालत जानुभएको थियो, उहाँलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । कान्छो दाइ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । आमालाई पनि पक्राउ गर्‍यो । […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752755
‘मिस नेपाल–२०१९’को काठमाण्डौ अडिसन सम्पन्न
‘मिस नेपाल २०१९’का लागि काठमाण्डौ अडिसन सकिएको आयोजकले बताएको छ । आइतबार अन्नपूर्ण होटलमा अडिसन सम्पन्न भएको हो । अडिसनमा ‘मिस नेपाल’मा सहभागी हुनका लागि यूवतीहरुको उत्साहजनक सहभागीता रहेको दि हिडेन ट्रेजरका अध्यक्ष गोपाल सुन्दर कक्षपतीले बताए । काठमाडौं अडिसन सकिएपछि विदेशमा रहेका नेपालीमुलका युवतीहरुसँग पनि अडिसन लिइएको थियो । विभिन्न देशबाट सहभागी भएका युवतीहरुलाई […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752776
विप्लवसँग तत्काल वार्ताको सम्भावना छैन : रक्षामन्त्री पोखरेल
११ चैत, विराटनगर । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विप्लव समूहसँग वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । विप्लव समूहले हतियार बोक्ने र बम पड्काउने जस्ता काम जारी राखेकाले तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको रक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । विराटनगर बिमास्थलमा सोमबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले विप्लव माओवादीले हतियार विसाएको खण्डमा भने वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752771
पाकिस्तानमाथि अष्ट्रेलियाको सहज जीत
११ चैत, काठमाडौं । पाकिस्तानसँगको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा अष्ट्रेलियाले सहज जीत निकालेको छ । पाकिस्तानलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै अष्ट्रेलियाले लगातार जीत हात पारेको हो । पाकिस्तानले प्रस्तुत गरेको २८५ रनको चुनौती अष्ट्रेलियाले ४७.५ ओभरमा दुई विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो । अष्ट्रेलियाका लागि कप्तान एरोन फिन्चले शतकीय पारी खेलेपछि जीत सम्भव भएको हो । कप्तान […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752768
‘रोमियो’को पाश्र्व संगीत चोरिएपछि युटुबबाट साउन्ड नै गायब
चलचित्र ‘रोमियो’ले हलमा राम्रो व्यापार गरेन । हसनराजा खानको निर्माणमा बनेको यो चलचित्र हलमा चिप्लिएपनि युटुबमा राम्रै प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा निर्माताको थियो । तर, चलचित्र हेर्दै जादा दर्शकले धेरै ठाउँमा पाश्र्व संगीत नै भेट्दैनन् । जसले चलचित्रलाई खल्लो बनाइदिएको छ । आखिर, पाश्र्व संगीतमा त्यस्तो के समस्या आएको होला ? चलचित्रका निर्माता तथा नायक […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752765
फाइदा मात्र हैन, हानी पनि गर्छ मेवाले
मेवा, जो सर्वपि्रय फल हो । स्वास्थ्यका लागि यो अति हितकार मानिन्छ । त्यसैले त उखान बनाइएको छ, ‘सेवा गरे, मेवा मिल्छ ।’ अहिले बजारमा मेवा उपलब्ध हुन थालेका छन् । मौसमी फलफूल खोज्नेहरुको लागि यो उपयुक्त रोजाइ बन्नसक्छ । म्याग्नेसियम, पोटासियम, नियासिन, प्रोटिन तथा क्यारोटीनयुक्त तथा डायटरी फाइबरले भरिपूर्ण मेवा शरीरको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752766
मिर्गौलाको पत्थरी भए बियर पिउनुपर्छ ?
जब कुनै शारीरिक समस्या लिएर तपाईं चिकित्सककहाँ पुग्नुहुन्छ, तब तपाईंको नियमित खानपानमा व्यापक कटौती गरिन्छ । नुन कम गर्नु । चिल्लो-पिरो नखानु । तारेको भुटेको नखानु । मदिरा छाड्नु । चुरोट सेवन नगर्नु । वोसोयुक्त खानेकुरा कम गर्नु । रातो मासु नखानु । तर, कुनै रोग विशेष लिएर तपाईं अस्पताल पुग्नुभएको तपाईंलाई ‘बियर पिउने सुझाव’ […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752762
चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेलिकम नेटवर्कको क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । तर पछिल्लो समय हुवावेले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पश्चिमा देशहरुले हुवावेमाथि जासूसी गरेको आरोप लगाएका छन् । के साच्चै हुवावे दोषी हो ? कि त हुवावेमाथि अनावश्यक आरोपहरु लगाइएका पो हुन् कि ? हुवावेको कहानी यस्तो छ । रहस्यमय […]
Click here to Read full Details Sources @ https://www.onlinekhabar.com/2019/03/752761